Gaas iyo safiirka Taliyaaniga oo ku kulmay Garowe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gaas iyo safiirka Taliyaaniga oo ku kulmay Garowe
Mareeg.com: Safiirka Dowladda Talyaaniga u qaabilsan Soomaaliya Fabrizio Marcelli, ayaa maanta tagay magaalada Garowe ee xarrunta maamulka Puntland.
Madaxwaynaha maamulka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa Garowe ku soo dhaweeyay Safiirka Talyaaniga u jooga Soomaaliya Ambassador Marcelli.
Madaxwayne Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo la hadlay Warbaahinta ayaa tilmaamay in Puntland iyo Talyaaniga uu ka dhaxeeyo Xiriir Wanaagsan.
“Dowladda Talyaaniga waad la socotaan Puntland waxa ay kawadaa Mashaaricda ugu badan uguna wanagsan, oo uu ugu horeeyo lacagta ku baxaysa Garoonka diyaaradaha ee Boosaaso, Tv-ga Dowladda Puntland oo hada shaqaynaya iyo Taageerada dhanka Booliska Puntland…’’ ayuu yiri Madaxwayne Gaas.
‘’Taageerada dhanka Caafimaadka ah sida Cisbitaaladda Garoowe & Eyl iyo Mashaariic kale oo badan ayaa dowladda Talyaanigu ugu deeqay Puntland, sidookale waxaan ka rajaynaynaa Mashaariic kale oo farabadan in Puntland ay ka fuliyaan…’’ ayuu hadalkiisa raaciyay Madaxwaynaha Puntland Dr.Cabdiwali Gaas.
Ambassador Marcelli oo isna dhankiisa lahadlay Warbaahinta ayaa Madaxwaynaha Puntland uga mahadceliyay Sida wanagsan ee uu u soo dhaweeyay, wuxuuna sheegay in dowladda Talyaaniga ay sii wadayso Taageerada ay siiso Puntland.
Ambassador Marcelli ayaa Puntland u yimid in uu Puntland kala hadlo mashaariicda horey u socday iyo kuwa dhawaan la rajeenayo in la hirgeliyo.
Spain: Labo diyaaradood oo si la yaab leh ku kala badbaaday
Khat consumers’ dilemma: Mafrash, Mosque or the British Pub?